अमेरिकी राजदूतसँगको भेटपछि किन पछि हटे शशांक ? - Jhilko
अमेरिकी राजदूतसँगको भेटपछि किन पछि हटे शशांक ?
काठमाडौं । महामन्त्री डा. शशांक कोइराला र नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्याण्डी डब्लु बेरीबीच भएको गोप्य भेटघाटपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको गतिरोध अन्त्य भएको छ । संस्थापन पक्ष र प्रतिपक्षबीच गतिरोध उत्पन्न भएका कारण गत मंसीर २६ गतेदेखि सुरु भएको नेपाली कांग्रेस केन्द्रयि समितिको बैठक विथोलिएको थियो ।
१४ औं महाधिबेशनको कार्यतालिका निर्माणलाई एजेण्डाको पहिलो बुँदामा राख्नुपर्ने वरिष्ठ नेता पौडेल पक्षको अडान र पार्टी संगठनलाई पूर्णता नदिई महाधिबेशनको कार्यातालिका निर्माण सार्वजनिक गर्न नमिल्ने संस्थापन पक्षको अडानका कारण नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक विथोलिएको थियो । इतर पक्षले वहिस्कार गरे पनि संस्थापन पक्षले एक दुई–दिन बैठक अघि बढायो, तर इतर पक्षले घुँडा नटेकेपछि बैठक स्थगित गर्न संस्थापन पक्ष वाध्य भयो ।
यस अवधिमा गतिरोध अन्त्यका लागि उपसभापति विमलेन्द्र निधिले अहोरात्र मेहनत गरे । सभापति शेरबहादुर देउवालाई समेत लिएर उपसभापति निधि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको निवास पुगे । दुई पक्षबीच करिव १५/२० चरणमा वार्ता तथा छलफल भयो । यसका लागि सभापति देउवाले उपसभापति निधिको नेतृत्वमा र वरिष्ठ नेता पौडेलले पूर्व उपसभापति प्रकाशमान सिँहको नेतृत्वमा समस्या समाधान टोली बनाएका थिए । यी टोलीबीच धेरै लामो छलफल हुँदा पनि निकास ननिस्किएपछि सभापति देउवाले अन्तिम तुरुप प्रयोग गरे । त्यो अन्तिम तुरुप थियो– ‘महामन्त्री डा. शशांक कोइराला र नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्याण्डी डब्लु बेरीबीचको भेटघाट ।
राजधानी काठमाडौंको कुनै होटलमा यो भेटाघाट भएको बुझिएको छ । समाचार स्रोतका अनुसार इण्डो प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गतको मिलेनियम च्यालेन्ज कार्पोरेशन ( एमसीसी) अभियानका सन्दर्भमा सत्तारुढ पार्टी नेकपामा उत्पन्न किचलोको बारेमा छलफल गर्ने भन्दै अमेरिकी राजदूत बेरीले कांग्रेस महामन्त्री कोइरालालाई भेटेका थिए । भेटघाटका क्रममा नेपाली कांग्रेसमा अहिले उत्पन्न विवादका बारेमा छलफल भएको थियो । समाचार स्रोतका अनुसार अहिलेको विवादमा लचिलो बन्न राजदूत बेरीले गरेको आग्रह महामन्त्री डा.कोइरालाले स्वीकार गरेका हु्न् ।
महामन्त्री कोइरालालाई बैठकमा सहभागी गराउने आफ्नो प्रयास सफल भएपछि सभापति देउवाले यही पुस १० गतेदेखि बस्ने गरी केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएका छन् । महामन्त्री कोइराला नै बैठकमा सहभागी हुने भएपछि वरिष्ठ नेता पौडेल पक्षले गर्दै आएको बहिस्कार प्रभावित हुने भएको छ । विगतमा पनि पौडेल पक्षले बहिस्कार गर्दा महामन्त्री कोइरालाले एक दुई दिन साथ दिने र त्यसपछि बैठकमा भाग लिने रणनीति अपनाएका थिए । महामन्त्री कोइरालाले साथ छाडेपछि पौडेल पक्षले वहिस्कार अभियान स्थगित गर्ने गरेको थियो । तर, यसपटक के हुन्छ ? एकिन भइसकेको छैन । सभापति देउवा भने महामन्त्री कोइरालाले भाग लिएपछि वरिष्ठ नेता पौडेल नाकाचालले बैठकमा सहभागी हुने कुरामा ढुक्क छन् ।
महामन्त्री कोइराला बैठकमा सहभागी हुने निश्चित भइसकेको अवस्थामा पौडेल पक्षको रणनीति बुझ्न सभापति देउवाले उपसभापति निधिलाई पठाएका थिए । समाचार स्रोतका अनुसार उपसभापति पौडेल धेरै गलिसेकका छन् । निधिसँगको भेटघाटमा वरिष्ठ नेता पौडेलले भनेका छन्–‘दुबै पक्षले जित्ने गरी ‘सेफल्याण्डिङ’ का बुँदा तयार गर्नू, यसरी धेरै दिन पार्टीलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउने पक्षमा म पनि छैन ।’
वरिष्ठ नेता पौडेलको यो आग्रहपछि उपसभापति निधिले १४ औं महाधिबेशनको कार्यतालिका र पार्टी तथा भ्रातृ संस्थाहरुलाई पूर्णता दिने प्रस्ताव एउटै प्याकेजमा छलफल तथा निर्णय गर्ने गरी सहमतिका बुँदा निर्धारण गरेका छन् । विभागको संख्या ४२ वटा नै हुने भएको छ । विधानमा २८ विभागको प्रावधान राखिएका कारण एउटा पनि बढाउन नहुने अडान पौडेल पक्षले राखेको थियो । यसैगरी पौडेल पक्षले नेपाल तरुणदल र नेवि संघमध्ये एउटा संगठनको अध्यक्ष पद आफ्नो पक्षलाई चाहिने दावी गरेको थियो । तर यो दावी पौडेल पक्षले छाडेको छ ।
वरिष्ठ नेता पौडेल र महामन्त्री डा. कोइरालाबीच फाटो उत्पन्न गराउन नसकेसम्म १४ औं महाधिबेशनमा चुनाव जित्न आफूले नसक्ने जोडघटाउ सभापति देउवाको छ । यही रणनीतिका लागि देउवाले महाधिबेशन पर धकेल्ने र विधान विपरीत विभागको संख्या थप्ने प्रस्ताव लगेका थिए । सुरुमा पौडेल र कोइराला एकै ठाउँमा देखिए पनि अन्तिममा कोइरालाले हात झिके । महामन्त्री कोइरालाको यो कदमबाट पौडेल के कति रुष्ट बनेका छन् ? त्यसको आँकलन हुन भने बाँकी नै छ । समयबद्ध साप्ताहिकबाट
एमसीसीः सहायताको आवरणमा हस्तक्षेपको नीति
सडक दुर्घटनाले दुखेको देश
दिवंगतका परिवारसँग भेट गरी प्रचण्डले दिए समवेदना
नेकपाका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ताप्लेजुङमा हेलिकप्टर दुर्घटनामा...
पृथ्वीराजमार्गअन्तर्गत तनहुँको व्यास नगरपालिका–४ बुल्दीपुल नजिक शुक्रबार राति बस...
चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिनफिङ र नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डबीच...
चीनका राष्ट्रपति एवं चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव सि चिनफिङ र नेकपा अध्यक्ष...
सिरहामा जलेर दुई बालिकासहित तीनको मृत्यु
सिरहामा आज भएको आगलागीमा दुई बालिकासहित तीन जनाको मृत्यु भएको छ